मीठो कुरा गर्दा त खुसी लाग्छ, | मरुभूमीको कोसेली nepalkuwait
मीठो कुरा गर्दा त खुसी लाग्छ,
Posted on मार्च 27, 2010 by आर. बी. बुढाथोकी	दुःख…तर नबोकी सुखै छैन । कहाँ-कहाँबाट मेरो नम्बर पाउँछन्, अनि नानाथरीका कुरा गर्छन् । प्रशंसकहरूले मीठो कुरा गर्दा त खुसी लाग्छ, तर जे पायो त्यही बोल्नेहरूले दिक्क लगाएका पनि छन् । जति पटक नम्बर चेन्ज गरे पनि सुख पाएकी छैन ।यो अरूको फाइदाका लागि बोकेको चीज हो । आफूले दसौं पटक ट्राई गर्दा फोनै लाग्दैन…लाग्यो भने पनि कुरा गर्दागर्दै काटिन्छ । अनि फेरि गर्नुपर्‍यो, पैसा फेरि चढ्छ । अरूले गर्दा पनि लाइन काटिने र नबुझिने भएकाले उनीहरू रिसाउलान् जस्तो लाग्छ । दुःखै भए पनि मोबाइल बोक्नु मेरा लागि बाध्यता भएको छ ।
भुवन केसी -नायक)
सुखै भन्नुपर्ला…नेटवर्कको प्रोब्लमले लाइन काटिने, फोन नलाग्ने, बोलेको नबुझिने भए पनि त्यसको बानी परिसक्यो । कहिलेकाहीं ‘ब्लफकल’ गर्नेहरूका कारणचाहिँ मोबाइल फोन दुःख हो कि जस्तो लाग्छ ।
उस्तै-उस्तै हो…सुख पनि छ अनि दुःख पनि । यो चीज भएन भने पनि अचेल कामै गर्न गाह्रो, भयो भने पनि बेला न कुबेला बजेर टेन्सन…वास्तवमा मोबाइल भिर्नु भनेको ‘विक्रम बेताल’को कथामा झैं राजा विक्रमले जबरजस्ती बेताललाई बोक्नुपरेजस्तो हो ।
सुगम पोखरेल -गायक, संगीतकार)
दुःख मात्रै भन्न मिल्दैन यो त घाँडोजस्तो लाग्छ…अझ त्योभन्दा पनि गहिरो शब्द छ भने त्यही जस्तो…नभए पनि नहुने…सम्पर्कहरू टुट्ला भन्ने डर हुन्छ । हुँदा पनि व्यक्तिगत जीवन नै नहुने..जतिबेला पनि बजेर हैरान । नेटवर्कको समस्या त्यस्तै छ । मेरो विचारमा मोबाइल फोन बिरालाको घाँटीको घण्टीजस्तै हो ।
Filed under: समचार « नेपाल आउन चाहन्छन् आदित्य नारायण पहिलो सर्म्पर्कमा किन रगत आएको होला ??? यौन जिज्ञासा »